Headline Nepal | 'नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनेगरी स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव लैजाऔ' : विष्णु पौडेल, ओलीको उक्साहट की आफ्नै प्रस्ताव ?
'नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनेगरी स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव लैजाऔ' : विष्णु पौडेल, ओलीको उक्साहट की आफ्नै प्रस्ताव ?
३ मंसिर,काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनेगरी स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजान माग गरेका छन् ।
सचिवालय बैठकमा महासचिव पौडेलले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुंदै पार्टीभित्रको बढ्दो विवादले संकटमाथि संकट निम्तिएको भन्दै समस्या समाधानमा सचिवालय असफल भएको समेत बताएका थिए । ‘समस्या धेरै भयो तर समाधानमा सचिवालय असफल बन्यो’, बैठकमा सचिवालयको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले भने, ‘सचिवालय विघटन गरौँ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनेगरी स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाऔं ।’ उनले भने ।
त्यस्तै महासचिव पौडेलले नेकपा भित्रको विवादले देशनै बर्दादीतिर जाने भन्दै सबै एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘आरोपपत्र’ को संज्ञा दिएको एक नेताले जानकारी दिए । ‘आरोपपत्रको व्यवस्थित जवाफ दिन्छु । त्यसका लागि १० दिनको समय चाहिन्छ । त्यो समय माग गर्छु’, ओलीले बैठकमा भने ।
त्यस्तै आज ओलीकै मागअनुसार बैठक आगामी मंसिर १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । ओलीले प्रचण्डको ‘काउन्टर’ मा नयाँ प्रस्ताव समेत ल्याउने भएका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीले आगामी मंसिर १३ गते बस्ने बैठकमा आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको जानकारी दिए । सचिवालय बैठकमा यसअघि नै प्रचण्डले पेश गरेको र ओलीले ल्याउने दुबै प्रस्तावमाथि छलफल हुने उनको भनाइ छ । यसअघिको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै प्रस्ताव ल्याएका थिए भने सो प्रस्तावपछि नेकपामा विवाद चर्किएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको संकट र निवारणको सम्बन्धमा सबै प्रस्ताव समेतको आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिने बताए ।
यस्तै बैठकले आगामी १८ गते स्थायी समिति बैठक बस्ने र १५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक २५ गतेका लागि सारिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेकपा सचिवालय बैठक: दुई अध्यक्षबीच घोचपेच, यस्तो छ ओलीले प्रचण्डलाई पेश गरेको जवाफी प्रस्ताव
प्रचण्डलाई जबाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीको छुट्टै प्रस्ताव
नेकपा सचिवालय बैठक शुरु : प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री
यी हुन् कोरोना व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गर्ने ११ स्थानीय तह
सरकार एकपक्षीय बन्दा भ्रष्टाचारहरु कारबाहीमा परेनन् : सभापति साह
चलचित्र ‘परदेशी २’ को छायांकन शुरु, के छ त कथावस्तु ?
एफएनसीसीआई चुनाव: प्रदेश केन्द्रीयसदस्य पदको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै, सुदूरपश्चिमबाट सदस्यमा कुँवर विजयी
इंग्लिस प्रिमियर लिग: म्यानचेस्टर सिटी र बर्नले भिड्दै
कहिँ नभएको लुटतन्त्र गजुरीमा : सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप गर्दै अवैध कर शंकलनमा तस्करलाई साथ
U.S. Dollar 1 118.43 119.03
European Euro 1 140.62 141.34
UK Pound Sterling 1 155.83 156.62
Swiss Franc 1 131.49 132.15
Australian Dollar 1 85.96 86.39
Canadian Dollar 1 90.72 91.18
Singapore Dollar 1 87.83 88.27
Japanese Yen 10 11.46 11.52
Chinese Yuan 1 18.00
Saudi Arabian Riyal 1 31.58 31.74
Qatari Riyal 1 32.33 32.50
Thai Baht 1 3.87 3.89
UAE Dirham 1 32.24 32.41
Malaysian Ringgit 1 28.69 28.83
South Korean Won 100 10.56 10.61
Swedish Kroner 1 13.71 13.78
Danish Kroner 1 18.87 18.97
Kuwaity Dinar 1 387.91 389.88
Bahrain Dinar 1 314.10 315.70
Exchange Rates as of 2020-11-29 .